कतै तपाई कै त होइन यो चमत्कारीक राशी ? जसको भूत वर्तमान र भविष्य सबै गज्ज्ब छ ! – Sandesh Press
July 23, 2021 404
काठमाडौँ । अंग्रेजी महिना अनुसार अस्ती २१ जुलाई २०२१ । यस दिनमा जन्मेका व्यक्तिको मूलांक नम्बर ३ हुन्छ, जसको स्वामी बृहस्पति हो। मूलांक नम्बर ३ भएकाहरु धेरै ज्ञानी र बुद्धिमान हुन्छन् । ति व्यक्तिहरूको बुझ्ने क्षमता अक्सर उनीहरुको उमेर भन्दा बढी हुन्छ।
अनुभव यी मानिसहरुमा अरु भन्दा धेरै देख्न पाइनछ । मूलांक नम्बर ३ भएकाहरू काममा अनुभवी र कुशल हुन्छन् । ति व्यक्तिहरूको ज्ञानको स्तर धेरै उच्च हुन्छ । मानिसहरू प्रायस् उनीहरूसँग परामर्श गर्न मन पराउँछन् ।
मूलांक नम्बर ३ भएकाहरू काम गरिरहेको जुनसुकै क्षेत्रमा कुशल हुन सक्छन् । मूलांक नम्बर ३ भएका मानिस धार्मिक र सात्विक प्रवृत्तिका हुन्छन् । ति मानिसहरूलाई धर्ममा गहिरो विश्वास हुन्छ ।
उनीहरूले परम्परा र पारिवारिक मूल्य मान्यताहरूको सम्मान गर्दछन् र जीवनभर पालन गर्न सक्दो प्रयास गर्छन् । मूलांक नम्बर ३ भएका मानिस आत्म–सम्मान र महत्वाकांक्षी हुन्छन् । मूलांक नम्बर ३ भएकाहरु अरूलाई मद्दत गर्न तयार हुन्छन् । तर हतारमा कसैको सामु उनीहरू सहयोगका हात फैलाउँदैनन् ।
आज जन्मदिन परेका मानिसहरूलाई यस वर्ष पारिवारिक जिम्मेवारीले घेर्नेछ । तपाईंको पेशेवर स्तरमा प्रगति हुनेछ । साउन महिनामा, अचानक पैसा प्राप्त गर्ने सम्भावनाहरू बनेका छन् ।
तर कुनै पनि प्रलोभनमा आएर कुनै गलत काम गर्नबाट जोगिनुहोस् । साउन महिनाको उतार्ध र भाद्र महिनाको पूर्वाधमा समय व्यवसायका लागि राम्रो हुनेछ । तपाईंको भौतिक सुख बढ्नेछ ।
भाद्र महिनाको उतार्धमा विवाह योग्य मान्छे को लागी शुभ समय रहेको छ । आषाढ महिनाको पूर्वाधमा यात्राको योग रहेको छ । कार्तिक महिनामा आयका नयाँ स्रोतहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
तर कुनै ठूलो निर्णय लिनबाट बच्नुहोस् । मंसिर महिनाको उतार्धमा अनावश्यक रिस छोड्नुहोस्, अन्यथा तपाईंको काम सकिन समय लाग्न सक्छ ।
पौष महिनामा अलिक चिन्तित हुने देखिएको छ । तपाईंको दिमाग विचलित हुनेछ । माघ महिनामा मानसिक तनाव उत्पन्न हुन सक्छ । केही काम आलस्यका कारण स्थगित हुन सक्छन् । तपाईं फागुनको महिनामा केही साहसिक कार्यमा सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ ।
चैत्र महिनाको समय कुनै पनि नयाँ काम शुरू गर्न को लागी राम्रो छ । व्यक्तिगत जीवनमा कम समय दिन सक्षम हुने देखिन्छ । २०७९ साल बैशाख महिनामा, आमा र श्रीमती बीच विवाद हुन सक्छ ।
जेठ महिनामा तपाईले काममा सफलता पाउनुहुनेछ । बच्चाहरूको दिमाग अध्ययनमा लाग्ने देखिएको छ । त्यस समयमा समयको सदुपयोग गर्नुहोस् ।
Prevदुबईमा सलमान खानको १७ वर्षकी छोरी र श्रीमती रहेको दाबी !
Nextयी ६ राशिका युवतीले पाउँछन् निकै धनवान पति, हुँदैन कहिलै आर्थिक अभाव